ㆍISBN : 9788928240401
ㆍPages : 401
Testamende Itsva inotanga neEvhangeri Ina, dzinoti Evhangeri yaMateo, Marko, Ruka naJohane. Evhangeri Ina dzose idzi dzakabata pamwe nekunyora nezvehushumiri hwaJohane Mubhapatidzi zvakazara. Chikonzero ndechekti uhu hushumiri hwakakosha kwazvo. Kana pasina kunzwisisa hushumiri hwaJohane Mubhapatidzi, hatingagoni kureva kuti tinoziva hushumiri hwaJesu Kristu.
Kana zvakadaro, tinogona kuzvibvunza tichiti, “Ko hushumiri hwaJohane Mubhapatidzi hwakanyorwa muEvhangeri Ina hwakanyanyokosha zvakadaro here?” Jesu, achidoma Johane Mubhapatidza, akataura achiti, “Kana muchida kuzvigamuchira, ndiye Eria akanga achizouya” (Mateo 11:14). Naizvozvo, Johane Mubhapatidzi akanga ari munhu akazvarwa panyika pano kuti abate basa rakasanangurwa. Jesu akati zvakare, “Kubva pamazuva aJohane Mubhapatidzi kusvikira zvino, umambo hwekudenga hwanga huchipfuurira mberi nechisimba, uye varume vechisimba vanohutora” (Mateo 11:12). Ichi ichokwadi nekuti Johane Mubhapatidzi akaberekwa panyika pano, uye paakabhapatidza Jesu Kristu, zvivi zvenyika ino zvakatambidzwa kwaari. Saizvozvo, Jesu akakwanisa kutora zvivi zvenyika ino kamwechete. Kuburikidza nekutendera kuti izvi zviitike, Ishe vakatendera vaya vanotenda kuevhangeri yaJohane Mubhapatidzi uye nehushumiri hwaJesu kuti vapinde Denga kuburikidza nekugamuchira kushambidzwa kwezvivi. Iyi ndiyo dudziro iri mukati meMagwaro kubva mundima yeEvhangeri yaMateo chitsauko 11, vhesi 12-14.
Ko unotenda kuti evhangeri yemvura noMweya ndiyo zvokwadi here? Kana uchitenda, zvinoreva kuti unoziva nezvehushumiri hwaJohane Mubhapatidzi uye nehushumiri hwaJesu zvakazara. Asivo, vaKristu vazhinji vasinganzwisisi hushumiri hwaJohane Mubhapatidzi havazive evhangeri yezvokwadi yemvura noMweya uye vanorarama hupenyu hwavo hwekutenda vachitevedza zvishuwo zvenyama yavo bedzi. Kuburikidza nekusaziva, vanhu vakadaro havatomboedze kuda kuziva hushumiri hwaJohane Mubhapatidzi iyo yakanyorwa muEvhangeri Ina. Naizvozvo, panguva refu yose iyi, hushumiri hwaJohane Mubhapatidzi hwakanga huchitarisirwa pasi kunyange nepakati pevaKristu vanozviti ivo vanotenda kuna Jesu. Zvichida nokuda kwechikonzero ichi, ndakaona kuti hakuna vanhu vazhinji vane dokwairo yehushumiri hwaJohane Mubhapatidzi mazuva ano. Saizvozvo, vanhu vane chiwanzo chekushoora avo vane chido nekunzvera nhau iyi. Chikonzero ndechekuti vanhu vazhinji vakanga vasingacherechedzi hushumiri hwaJohane Mubhapatidzi uye nehushumiri hwaJesu kwenguva refu kwazvo.
SN/21/Ch1_Unofanira Kuziva Uye Nekutenda kuHushumiri hwaJohane Mubhapatidzi.mp3
1. SN/21/Ch1_Unofanira Kuziva Uye Nekutenda kuHushumiri hwaJohane Mubhapatidzi.mp3
2. SN/21/Ch2_Johane Mubhapatidzi Aisava Mukoniwi.mp3
3. SN/21/Ch3_Johane Mubhapatidzi Uyo Akauya neNzira Yekururama.mp3
4. SN/21/Ch4_Tarisai Hushumiri hwaJohane Mubhapatidzi！.mp3
5. SN/21/Ch5_Ngatifadzwe neKubwinya kwaMwari.mp3
6. SN/21/Ch6_Ko Unoziva Hushumiri hweVaranda Vaviri vaMwari Here？.mp3
7. SN/21/Ch7_Nemhaka Yei Jesu Akabhapatidzwa.mp3
8. SN/21/Ch8_Paridzai Evhangeri yeZvokwadi Uye neChiito chaJesu cheKururama.mp3
9. SN/21/Ch9_Hukama Pakati peBasa raJohane Mubhapatidzi neEvhangeri yeYananisiro paZvivi Zvedu.mp3
10. SN/21/Ch10_Jesu Uyo Akauya Kuzodzima Zvivi Zvako.mp3
11. SN/21/Ch11_“Tarira，Ndichatuma Nhume Yangu”.mp3
12. SN/21/Ch12_Ngatitendei Kuna Jesu Tichinzwisisa Johane Mubhapatidzi.mp3